ELake Tanganyika, kwavulwa phakathi XIX leminyaka IsiZulu abahambi Richard Burton noJohane Speke e -Afrika Ephakathi. Kamuva ucwaningo lokhu yemvelo angenasawoti kwesigubhu esiyingqayizivele ukwenza abahambi abaningi abadumile - njengoDavide uLivingstone Genri Stenli.
Indawo eseduze naleli chibi uhlalwe besizwe Ha, wathutha lapha eminyaka ambalwa adlule kusukela ezifundeni West Afrika yalungisa ogwini echibini nasezindaweni ezizungezile - ku Gombe.
Lake Tanganyika kwamiswa emgqeni we-East African Rift, okuyinto ingenye esiyingqayizivele kunazo amafomu Geological eplanethini yethu. Ibanga ezivela eMpumalanga Ephakathi futhi Mozambique.
Lena umzimba omkhulu wamanzi singesesibili emhlabeni ngemva iChibi iBaikal e ezijulile-amanzi awo: ukujula yayo imayelana 1,500 amamitha. It, kanye umfowabo omdala, linikeza amanzi oluvelele esobala, okuvumela ukuba ubone ngezansi ngezinye 33 amamitha ukujula.
Ngasikhathi sinye, iLake Tanganyika futhi kubhekwa isikhathi eside emhlabeni. Ubude bayo 708 amakhilomitha kanye ububanzi 80 amakhilomitha.
Izazi zesayensi yokwakheka komhlaba zikholelwa ukuthi owabunjwa eminyakeni kwezigidi eziyisikhombisa kuya kweziyishumi edlule. Sekucala amanzi omkhulu bagxila echibini ejulile e-Afrika, elisoGwini umngcele mane kuphela amazwe: Burundi, eTanzania naseZambia kanye Congo.
Ngokuvamile, iLake Tanganyika kubhekwa azifani izindawo begazi eplanethini yethu, ngokuthi uhlobo yokuziphendukela kwemvelo "Umbukiso". Ngokwesibonelo, ayisishiyagalolunye nesikhombisa amaphesenti bonke echibini izinhlanzi cichlid emhlabeni itholakala kuphela kulawo manzi. Kukhona eziyisikhombisa izinhlobo izinkalankala bukhoma, ezinhlanu mollusk nokunye. D.
Amanzi echibini kungatholakala mayelana 350 nezinhlobo zezinhlanzi ezingu ezingavamile. Kuyinto kusukela kulezi zindawo kwenziwa nepahla ethunyelwa eenarheni zangaphandle kuya okugcinwa ohlonishwa kakhulu emadolobheni amaningi emhlabeni, njengoba cichlids lweLake Tanganyika athandwa kakhulu, ikakhulukazi e-Europe.
Azungeze ichibi amanga amabili zokulondolozwa, nemvelo igodla Gombe Stream National Park futhi Mahale, e isimo semvelo zintekenteke kakhulu okuyinto abangaba yinkulungwane chimpanzee ekhaya. Kuyinto kulezi zindawo kungase kube kodoba esiyingqayizivele, kanye safari ongenakulibaleka nge okwashiwo izimpilo zalaba wezinkawu. Ensimini ka lezi ezingcwele ezimbili kwakhiwa Camp futhi Safari Lodge, okuyinto eza ukuphumula eziningi izivakashi. Indawo kulezi zindawo - kungcono ithuba elikhulu ukuchitha isikhathi ejabulela ukubukwa amahle kakhulu kuleli chibi kude befuna komuzi, kanye meet izilwane eziningi Afrika.
Tanganyika - echibini, okuyinto kakhulu sport ethandwa ngokudoba saseNayile perch, inhlanzi uGoliyati kanye nezinye izinhlobo eziningi okungavamile. Njalo ngonyaka ekudobeni kwentwasahlobo ubuqhawe ihlelwe lapha, okuletha ndawonye ukudoba abathanda kusuka emhlabeni wonke.
Ichthyofauna Tanganyika kuyinto zinothile zinhlobo zayo kwengoma. Eziningi zalezi zilwane ukukhombisa ukufana athusayo kolwandle efanayo, nakuba echibini kuyinto amanzi ahlanzekile. Incazelo yaleli engavamile itholakala izici kubangelwa umlando Geological kwechibi.
AboMdabu base-bakubize ngokuthi "amanzi ethangini letilikhulu." Kuthiwa leli gama wanikezwa echibini Swahili, okuyinto ke waya phakathi nezwe.
Fire Isiqhingi Lanzarote
Leningrad Zoo ku "Gorky" metro station
Indlela ukudweba lynx yase? Incazelo endleleni
I ewusizo uju: imikhiqizo bee grade nezimpahla zabo